Magaalaa Moyaalee Keessaa Reeffi Nama du’e Argamee Jira, Dilbata Kaleessaa Namoonni Lama Rasaasaan Dhahamuus Odeeffannoo Qabna: Angawoota Naannoo
Bitootessa 12, 2018
Uummata Moyaalee irraa godaane
Bulchiinsa naannoo Oromiyaa Godinaa Booranaa magaalaa Moyyaalee keessatti Sambata dabre Bitootessa 10 bara 2018 namoonni 10 raayyaa ittisaa motummaan ajjeefamuu fi kanneen biroon 11 madaa’uu aangawonni mootummaa ibsanii jiran. Namoonni ajjeefamanii fi madaa’an kun irra jireessi Oromoo ta’an iyuu namoonni gosawwan biraa keessa jiraachuunis beekamee jira.
Gama kaaniin dilbata kaleessaa handaara magaalaa Moyyaaleetti namoonni lama rasaasaan rukutamanii madaa’uu aangawaan goidinaa odeeffannoo qabna jedhu. Akkasumas reeffi nama tokkoo har’a ganama magaalattii keessatti argamuu Kantiibaan Moyaalee dubbatanii jiran.
Ajjechaa moyyaalee keessatti gaggeeffame dheessuun uummanni kuma 50 ta’u magaalaa Moyyaalee fi naannoo isaatti dheessee daangaa Keniyaa seenuu isaa bulchiinsi magaalatti beeksisee jira.
Ajjeechaa magaalaa Moyyaalee keessatti geggeessame kana ilaalchisee ka bakka-bu’aan Sekreeteriyaatii Komaand Poostii yeroo Muddamaa Itiyoophiyaa Jeneraal Hasan Ibraahim sabaa-himaa mootumma Itiyoophiyaa irratti ibsa kennaniin odeeffannoo digoggoraan tarkaanfiin kun fudhtamuu ibsanii humnootiin kana godhan labsii yeroo muddamaa eegsisuuf kan bobba’an miti jedhan.
Addi Bilisummaa Oromoo gama isaan ibsa kenneen Bitooteessa 8 fi 9 bara 2018 onoota Miyoo fi Moyyaalee keessa bakka adda addaatti tarkaanfii fudhachuu isaa beeksisee jira.
Gma kaaniin Abbaan Gadaa Booranaa Kuraa Jaarsoo jiraattota Mooyyalee kanneen ajjeechaa Sanbata darbee baqatanii Keeniyaa seenan bira dhaquun ilaalanii jiran. Namoonni ajjeechaa jiraattota irratti raaw’atan akka seeraaf dhiyaatan qondaaltota dhimma nageenyaa ka naannoo Oromiyaa fi Ka Federaalaa bira qaamaan dhaqanii akka gaafatanis dubbatanii jiran.
Namootni Mooyyalee dhaa baqatanii amma Keeniyaa, naannoo ‘SEESSII’ jedhamu jiran akka gargaarsa argatan mootummaan dhaabbatoota tola-ooltotaa achi ergee jira.